"Mashiripiti e mini" ichi ndicho chitsva cheKisimusi cheApple | IPhone nhau
"Mashiripiti e mini" ichi chitsva cheKisimusi chitsva chaApple
Apple ichangobva kuvhura yavo yeKisimusi kushambadzira umo mumhanzi zviri pachena protagonist. Hatione iyo iPhone, iyo iPad, maMacs kana iyo Apple Watch chero nguva yekuzivisa, izvo Apple zvinotiratidza mune ino nyowani yeKisimusi chiziviso ndeye AirPods Pro uye nyowani HomePod mini.
Ehe iyo HomePod mini iri kuve yechokwadi yekutengesa kubudirira uye zvakanyanya zvekuti kuti uwane imwe munyika medu unofanirwa kumirira kutumirwa kwemwedzi waNdira. Ehe, kusvika Ndira 8 hapana zvikamu zvekutumira Kumba, hongu, isu tine mukana wekutora kuchitoro pane dzimwe nguva uye misi iyi iri "zvakajairika" kusvika mumwedzi uno waMbudzi.
Panyaya yezvitoro muBarcelona tinogona kuwana masheya kana kuti panzvimbo yekuchengetera musi waNovember 27 semuenzaniso, asi iwe unofanirwa kuve nechitoro padyo nepamba uye kwete zvese zvitoro zveApple zvinowanikwa ipapo nekukurumidza. Asi isu tinoenda kuzivisa kwaApple ino Kisimusi ndosaka tiri pano. Inonzi "Mashiripiti e mini" inojekesa kudiki kune idiki rePambaPods.
"Mufaro mudiki haisati yambonzwika zvakadaro huru" idiki sirogani iyo Apple inotisiya isu pazasi peichi chitsva chitsva chine chinguva chingori pamusoro pemaminetsi maviri. Iye protagonist mune ino nyowani Apple chiziviso ndiye muimbi Tierra Whack, uye nguva yaunosvika kumba kurira kweAirPods Pro yako kunoenda kune yekutanga HomePod uye paunenge uchikumbira Siri kukwidza vhoriyamu, iyo nyowani uye diki HomePod mini inoonekwa pachikuva.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » HomePod » "Mashiripiti e mini" ichi chitsva cheKisimusi chitsva chaApple
Apple's TikTok account ine mafosheni mavhidhiyo
Spigen screen inodzivirira yako iPhone